ARIMAHA BULSHADA Archives - Page 13 of 13 - Raaso News Network ( RNN )
Home » ARIMAHA BULSHADA (page 13)
WAR HADA SOO DHACAY :- Xaalad Adag Oo Soo Wajahday Shidaalkii Laga Helay Dhulka Soomaalida Itoobiya.
Shirkadaha shidaalka ayaa shaqaalahooda kala baxay dhulka Soomaalida Itoobiya, kadib shaqaaqooyinkii dhowaan ka dhacay degaanadaasi oo keenay xaalado amni darro iyo hubanti la’aan ah. Wargeyska The Reporter ee ka soo baxa Magaalada Adis ababa ayaa qoray in Shaqaalaha oo u badan Shiinees la geeyay Magaalada Adis ababa, iyadoo sababta lagu sheegay amniga gobolka Soomaalida Itoobiya oo aan la isku halleyn ...
Cilad Bixin Lagu bilaabay Nalalka Cadceeda Ku Shaqeeya Ee Jidadka magaalada Muqdisho iyo Iftiinka Caasimada.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa caawa bilaabay howlo lagu dayactirayo nalalka cadceeda ku shaqeeya ee laga hirgeliyey inta badan jidadka waaweyn ee magaalada Muqdisho. Talaabadan ayaa timid ka dib markii maalin ka hor ay shabakadan allbanaadir.com baahisay war ku saabsan qaar ka mid ah nalalka cadceeda ku shaqeeya oo damay sababo la xiriira dayactir la’aan soo wajahday, taasoo keentay in wadooyinka ...
Golaha dhexe ee Xisbiga Dimoqaraadiga Shacabka Soomaalida Itoobiya ayaa gudoomiye cusub u doortay Axmed Shidde oo ah Wasiirka Isgaarsiinta ee Itoobiya. Axmed Shidde ayaa lagu doortay kulan ka dhacay magaalada Addis Ababa, wuxuuna xilka ka bedelayaa Madaxweynihii dowlad degaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar oo xilkaasi horey u hayey. Magacaabistan ayaa soo afjareysa saameynta uu ku leeyahay siyaasada dowlad degaanka ...
WAR CUSUB :- Akhriso Magacyada iyo Taariikhda Xubnaha Golaha Dhaqaalaha Qaranka Somalia oo Dowladu Soo Xushay
Golaha dhaqaalaha Qaranka oo dhowaan Madaxweyne Farmaajo ku soo saaray digreeto ayaa maalintii shalay lagu daah-furay magaalada Muqdisho, iyadoo ay xubno ka yihiin 9 dhaqaalyahan oo shan ka mid ah waa Soomaali. Dhaqaalyahannada Soomaalida ah ee ku jira golaha dhaqaalaha Qaranka ayaa kala ah: Dr. Ali Issa Abdi waa agaasimaha maamulka HESPI. Waxa uu PhD ka diyaariyay dhaqaalaha, master-kana waxa uu ...